Somalia: Madaxweynaha Soomaaliya Oo Ka Sheekeeyey Qiso Kala Qabsatay Nin Reer Burco Ah - Wargane News
Home Somali News Somalia: Madaxweynaha Soomaaliya Oo Ka Sheekeeyey Qiso Kala Qabsatay Nin Reer Burco...
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ka sheekeeyay qiso qabsatay markii uu ra’iisalwasaaraha Soomaaliya ahaa. Islamarkaanna wuxuu sheegay in qisaddaasi dhexmartay isaga iyo Nin reer Burco ah oo gacan siiyay nin reer Gabaharay ah oo doonayay inuu xafiiska igu yimaado.
madaxweynaha oo qisadda ka sheegayna wuxuu yidhi ugu horrayn “Xamar markii aan tegay, annigoo bil joogga. Waxa jira dadka Somaliland la yidhaahdo ama waqooyiga innooga yimaadda ee Xildhibaanada ah il gaar ah baynu ku haynaa, si gaar ahna waynu u soo dhawaynaa, Bacdamaa yihiin dad metelayaa midnimadda Soomaaliyeed oo iyaga oo joogi karaya Hargeysa, Soomaaliya xabadda inagula jira oo ay dadkoodiinna ka dayriyeen oo ay yidhaahdeen haddii ay halka (Soomaaliya) tegeen annaga nooma tirsanna.Marka waa in il-gaar ah iyo soo dhawayn aynu siinno. Marka xildhibaannadoodu anniga waxay I ahayeen dad ehelbayd ah oo xafiiska ii fadhiya oo waxay u baahan yihiin aanay lahayn su’aal.”Ayuu yidhi Farmaajo waxaannu hadalkiisii sii raaciyay “Marka waxa jiray nin xildhibaan ah oo reer Burco ah oo caqli badan, marka maalin walba wuu yimaadan, marka uu doonan wuu I arkaa. Dadka Soomaaliya jooggaan waxay barteen sida dadka loo akhriyo oo markiiba way ku akhrinayaan oo markiiba waxay ku sheegayaan waxaad rabto siday waxay doonayaan kaaga helaan. Ninkan odayga ah nin ay saaxiib yihiin oo reer Garbaharay ah ayaa xafiiska yimi oo wuxuu si hoos ahaan ah ugu yimi ninkii reer Burco oo wuxuu yidhi “Ninyoow waxaan u socdaa ninkan oo inaadeerkay ah oo gacantan baa iga jaban oo huteel Munna ayay igaga jabtay mar ay Al-shabaab weerar ku soo qaaday. Wuxuu yidhi ninkaa inaadeerkay ayuu ilaahay ii keenay, waxaan rabbaa inuu gacanta ii kabbo. Markaasuu ninkii reer Burco yidhi ninyow anniga maalin walba meeshan joogga oo xaaladu xaaladii hore way ka duwan tahay oo tallo ayaan ku siinayaa oo talada aan ku siinayaa. Ninku haddii aad doonayso inuu gacanta ku kabbo waxaad tidhaahda “Ninyow annigoo ciidamadii horre ah oo Huteelka ku jira oo ma ogtahay wixii bay dhisayaan, oo Huteelka degan oo ciidamadii Soomaaliyeed ee ka qaybgalay sugaya ayay Al-shabaab sidan ii galeen. Marka si Soomaalinimo ah iyo si bani’aadanimo ah gacanta ha laygu kabo ee ha sheegeen meesha aad ka timi.”Sidaa ayuu yidhi Farmaajo
Sidoo kale, Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ninkii dhibaataddu ku dhacday ugu soo galay xafiiska “Ninkii odayga ahaa xafiisku igu soo galay oo intii buu ii sheegay oo uu yidhi ninyaw si bani’aadanimo ah oo Soomaalinimo ah gacanta ha laygu kabo. Waxaan idhi ninyow waad khayrsantahay gacanta waa lagu kabayaa insha alla ee orod. Albaabka markii uu ka sii baxayay ayuu inta uu soo noqday igu yidhi ninyow dhegayso nin hoos fadhiya ayaa arrintaada ii sheegay oo taladan I siiyay oo si fiican kuu yaqaanna oo waxaan hay nin reer Garbaharaya, Markaa haddii aan soomaalinnimo caddaalad ku helayo maxaa qabiil igu wata.”